Wadankaan waxaa markiisa hore xukumi jiray dad taajiriin ah, dadkii ugu horeeyay oo wadanka soo galey waxee ka imaadeen Mongolia sanadihii 700, isla markaas neh waxee wadanka ku faafiyeen diinta islaamka. wadankaan waxaa ku soo batay ajaanib ka kala imaatay wadamada carabta iyo Turkiga, gaar ahaan kuwa turkiga sanadihii 800, sidaas darteed aa wadanka looga hadlaa luqada (Turkmen) oo asal ahaan looga hadli jiray wadanka turkiga.
Turkiga (/ tɜːrkmɛnɪstæn /) / tɜːrkmɛnɪstæn / ama / tɜːrkmɛnɪstɑːn / (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa); Turki / Turkiga / Turkiga, oo loo yaqaan [tyɾkmeniθtɑn]), (oo hore loo yaqaanay Turkiya)  , oo ay xuddun u tahay Kazakhstan xagga waqooyi-galbeed, Uzbekistan oo ah waqooyiga iyo bariga, Afgaanistaan ​​ilaa koonfur-bari, Iiraan dhanka koonfureed iyo koonfur-galbeed, iyo badda Caspian galbeed. Ashgabat waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn. Dadweynaha dalka ayaa ah 5.6 milyan, ugu hooseeya Jamhuuriyadaha Aasiyada Dhexe.
Turkigu wuxuu leeyahay kaydka lixaad ee ugu weyn caalamka ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Dalka intiisa badani waxay daboolayaan Garakum (Black Sand). Laga soo bilaabo 1993 illaa 2017, muwaadiniinta ayaa heley koronto, biyo iyo gaas dabiici ah oo lacag la'aan ah.
Turkiga waxaa xukumay madaxweynaha Saparmurat Niyazov (oo sidoo kale loo yaqaano Turkmenbashi) ilaa uu geeriyooday sannadkii 2006-kii. Madaxweynuhu wuxuu madaxweyne u doortey 2007. Sida ay ku warameyso Human Rights Watch, "Turkmenistan waa mid ka mid ah dalalka adduunka ugu cibaadeysan. xidhitaanka baaritaan madaxbannaan, warbaahinta iyo xorriyaadka diineed waxay ku xiran yihiin xaddidaadaha xakameynaya, difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo dhaqdhaqaaqayaasha kale waxay la kulmaan khatarta joogtada ah ee aargoosiga dowladda.” Kadib markii la hakiyay ciqaabta dilka, isticmaalka xukun ciqaabeed ah ayaa si rasmi ah loo tirtiray Dastuurka 2008.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkmenistan&oldid=225829"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Diseembar 2021, marka ee eheed 14:20.